Duty Mobile Mod Apk ၏ခေါ်ဆိုမှု 1.0.16 + ငွေကြေးအကန့်အသတ်မရှိ - အတိအကျကို Hack
အားဖြင့် exacthacks · သြဂုတ်လ 14, 2020
Duty Mobile Mod Apk ၏ခေါ်ဆိုမှု 1.0.16 + အကန့်အသတ်မဲ့ဒေါင်းလုပ်:
သင်ရရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပြီလား Duty Mobile Mod Apk ၏ခေါ်ဆိုမှု 1.0.16 + ငွေကြေးအကန့်အသတ်မရှိ? COD Mobile is no need to introduction due to its popularity. developer ဂိမ်းထဲမှာအစွန်းရောက်အဆင့်ကိုဂရပ်ဖစ်ပါဝင်သည်ပါပြီ.
၎င်းသည်လူကြိုက်အများဆုံးစစ်ပွဲဂိမ်းစီးရီးဂိမ်းတစ်ခုဖြစ်သည်. ယခုအခါမိုဘိုင်းအသုံးပြုသူများသည်သင်၏အရည်အချင်းများနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သည့်အဆင့်သတ်မှတ်ချက်အဆင့်တွင်ထိပ်ဆုံးသို့တက်ရန်ဤဂိမ်းကိုနှစ်သက်နိုင်သည်. ကစားသမားအလုံအလောက်သည်သူတို့၏သူငယ်ချင်းများနှင့်လည်းပျော်စရာကောင်းမည်.
ဤတာဝန် ၀ န်ဆောင်မှုမိုဘိုင်းဂိမ်းသည်မတူညီသော mods များနှင့်ကစားရန်အခမဲ့ဖြစ်သည်. တစ်ခုချင်းစီကို mods ကိုအခြားသူများထက်အများဆုံးပျော်စရာရှိသည်, ဒါကြောင့်မင်းကမင်းကိုပျော်အောင်လုပ်နိုင်တယ်. သို့သော်စျေးကြီးလွန်းသောဤဂိမ်းကိုပျော်မွေ့ရန်ပရီမီယံအရင်းအမြစ်အချို့ရှိပါသည်.
ယခင်ပို့စ်: Candy Crush Saga Mod Apk 1.180.1
ငါတို့အဘို့ဤ Duty Mod Apk v1.0.16 ဖန်တီးဒီကြောင့်ပါပဲ 2020 အကန့်အသတ်မဲ့ငွေနှင့်ကစားသမား.
အဘယ်ကြောင့် Duty ၏မိုဘိုင်း Mod Apk ၏ Call ကိုရွေးချယ်ပါ 1.0.16?
ဒီ COD Mobile Mod Apk ကိုရဖို့အကြောင်းများစွာရှိပါတယ် 1.0.16 သူတို့ထဲကတချို့ရှိပါတယ်:
သင်သည်သင်၏ခုန်တိုးမြှင့်နိုင်ပါတယ်, ဒီ apk မှတဆင့်မြန်နှုန်းနှင့်မီးနှုန်းသည်.
သင့်မှာအကန့်အသတ်မဲ့ငွေရှိလိမ့်မယ်, ချစ်သူ, aimbot နှင့်မျှမလက်နက် recoil.
ဂိမ်းရဲ့အစမှာဇာတ်ကောင်တွေ / လက်နက်တွေအားလုံးကိုသင်သော့ဖွင့်နိုင်တယ်.
ဂိမ်းထဲမှာအခြားအရင်းအမြစ်များကိုအများကြီးရရှိနိုင်ပါ. ကျွန်ုပ်တို့၏ modk apk သည်သင့်အားပိုမိုစိတ်လှုပ်ရှားစေပြီးဂိမ်းတွင်သင်၏ပြိုင်ဘက်ကိုအနိုင်ယူစေလိမ့်မည်.
ဂိမ်း Mod Apk သတ်မှတ်ချက်:
Apk အမည် Duty Mobile Apk ကိုခေါ်ဆိုပါ
ကစားပါ အန်းဒရွိုက် 4.3 + ဗားရှင်း
Apk ဗားရှင်း v1.0.16
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဤ apk ကိုမြင့်မားသောဂရပ်ဖစ်များဖြင့်ဝေမျှနေပြီးသင်ကအခြားကစားသမားများထက် FUN ပိုများလိမ့်မည်. ဒါဟာနောက်ဆုံးပေါ်ဗားရှင်းဖြစ်ပါတယ် 2020 နှင့်လူ့စိစစ်အတည်ပြုသို့မဟုတ်စစ်တမ်းမရှိဘဲရရှိနိုင်. မလိုအပ်အမြစ်မရှိပါ, သင်၏စက်ကိရိယာများနှင့်လုံခြုံစွာလည်ပတ်လိမ့်မည်.
Tags:: တာဝန်မိုဘိုင်း hack mod apk ၏ခေါ်ဆိုမှုcall of duty မိုဘိုင်းလ် modk apk အကန့်အသတ်မဲ့ငွေမရှိပါ 2020
နောက်ပုံပြင် Windows7Ultimate ကုန်ပစ္စည်းသော့ 2021 (32/64-နည်းနည်း) ဗားရှင်းအပြည့်
ယခင်ပုံပြင် ကန်ဒီခရပ်ရှ်ဂိမ်း 1.180.1 ခေတ်သစ် + APK အကန့်အသတ်မရှိအရင်းအမြစ်များ